डाक्टर केसीले आफुले पाएकाे प्राेत्साहन भत्ताले किसानकाे ऋण तिरिदिए – Dullu Khabar
डाक्टर केसीले आफुले पाएकाे प्राेत्साहन भत्ताले किसानकाे ऋण तिरिदिए
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ०६:५४
सुर्खेत । प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज केसीले पाएकाे प्राेत्साहन भत्ताबाट छिमेकी किसानको डेढ लाख ऋण तिरिदिएका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरेका डा. केसीलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । छिमेकी किसानले भैंसी किन्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेको थाहा पाएपछि सोही रकमले तिरिदिएको डा. केसीले भनाइ छ ।